Manchester City oo go’aansatay inay u dhaqaaqdo soo xerro galinta xiddig ka tirsan kooxda Paris St Germain – Gool FM
Manchester City oo go’aansatay inay u dhaqaaqdo soo xerro galinta xiddig ka tirsan kooxda Paris St Germain
Dajiye October 8, 2019
(Manchester) 08 Okt 2019. Manchester City ayaa go’aansatay inay u dhaqaaqdo soo xerro galinta xiddig ka tirsan kooxda reer France ee Paris St Germain inta lagu gudi jiray suuqyada kala iibsiga ee soo aadan.
Saraakiisha kooxda Manchester City ayaa waxay qorsheenayaan inay gacanta ku dhigaan saxiixa da’ayarka reer France iyo Paris St Germain ee Kylian Mbappé.
Kylian Mbappé oo dhaliyay 62 gool 92 kulan oo uu u saftay kooxda Paris St Germain, ayaa la sheegayaa inuu diyaar u yahay inuu ka tago garoonka Parc des Princes, haddii ay markan ku guuldareystaan tartanka Champions League.
Shabakada “Sports Mole” ee dalka England ayaa waxay sheegtay in Manchester City ay bilaawday inay raadiso bedelka David Silva, kaasoo xagaaga dambe ka tagi doona Etihad stadium, si la mid ah xiddigaha Sergio Aguero iyo Gabriel Jesus.
Gabriel Jesus ayaa lala xiriirinayay inuu ku biirayo kooxda Bayern Munich tan iyo markii uu furmay suuqii kala iibsiga ee xagaaga, laakiin xiddiga reer Brazil qudhiisa ayaa sheegay maalmo ka hor in wararka xanta ah ay yihiin kuwo been ah.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in kooxda heysata horyaalka Premier League ay dooneyso inay soo xero galiso Kylian Mbappé, kaasoo Paris Saint-Germain ay ku qiyaastay qiimahiisa aduun dhan 268 milyan ginni.
Sida ku cad wararka la sheegayo maamulka sare ee kooxda Man City ayaa aaminsan in Kylian Mbappé uu yahay ciyaaryahanka uu Pep Guardiola ugu baahan yahay mashruuca cusub ee kooxda Skay Blues, laakiin waxaaa laga yaabaa in loolan adag ay kala kulmi doonaan naadiga Real Madrid, taasoo sarre u qaadi karta qiimaha uu haatan suuqa ka joogo.
Fred oo ka jawaab celiyay dhaleeceynta adag ay u soo jeediyeen halyeeyada Manchester United
LAYAAB: Koox ka ciyaarta Premier League oo u diyaarsaneysa 210 milyan euro si kaliya ay u hesho Neymar